Jabuuti oo ku guuleysatay guddoonka baarlamaanka midoobay ee dalalka Afrika
By AxadleTM On Dec 1, 2019 Last updated Dec 1, 2019
Djibouti, Djibouti – Dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay xilka guddoomiyaha baarlamaanka midoobay ee Qaaradda Africa.
Maxamed Cali Xumad guddoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa xilkaasi loo doortay, wuxuuna bedali doonaa guddoomiyaha baarlamaanka dalka Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, kaas oo muddo hayey jagadaasi.
Guddoomiye Xumad oo ka hadlay guushiisa ayaa sheegay in tani ay fursad u tahay dhammaan dalalka ku yaalla Geeska Africa.
Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in ay wadamada Qaaradda Africa u baahanyihiin in ay dhaqaale ahaan is-dhexgalaan, isagoo ku baaqay in is-dhexgalku noqdo mid badax banaan, looguna daneynayo nolosha guud ahaan dadka ku dhaqan Qaaradda Africa.
Jackline Bakola”Doolar baa ninkeyga lagu duufsadey si uu ugu safro Soomaaliya”
Al-Bashiir oo la xukumay, go’aana laga soo saarey in loo dhiibayo ICC
Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay inuu ka shaqeyn doono Dimuqraadiyadda iyo sidii hormar looga sameyn lahaa gobolka.
Jabuuti ayaa muddooyinkii la soo dhaafay dadaallo xoogan ka waday gobolka, si ay uga mid noqoto dalalka ugu horreeya xaga hoggaanminta, iyadoona sidoo kale sanadka 2020-ka Kenya kula tartami doonto kursiga golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.